हलिउड अभिनेत्री तारालाई पोर्न फिल्म खेल्न १ मिलियन डलरमा अफर ! « रंग खबर
हलिउड अभिनेत्री तारालाई पोर्न फिल्म खेल्न १ मिलियन डलरमा अफर !
रंग खबर, काठमाण्डौं । इन्स्टाग्राममा अपलोड गरिएको बोल्ड तस्विरलाई देखेर हलिउड अभिनेत्री तारा रीडलाई पोर्न फिल्ममा काम गर्नका लागि अफर आएको खबर बाहिरिएको छ । एउटा पोर्नोग्राफी साइटले उनलाई आफ्नो आगामी पोर्न फिल्ममा काम गर्नका लागि एक मिलियन डलरमा अफर गरेको बताइएको छ ।
ताराले नयाँ वर्षको अवसरमा केही नग्न तस्वीर इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेकी थिइन्। उक्त न्युड तस्वीर देखेर पोर्न साइट यति प्रभावित भयो की उनीहरुले तत्कालै यी ग्ल्यामर्स नायिकालाई पोर्न फिल्मको अफर दिएको खबर छ।
यद्यपि अहिलेसम्म अभिनेत्री ताराले प्रस्तावको विषयमा केही जवाफ दिएकी छैनन् । ‘प्लेब्वाइ म्यागजिनको कभर गर्ल’ रहिसकेकी ताराले आफ्नो स्तन र पेटको प्लास्टिक सर्जरी गराइसकेकी छन् । अब यिनले पोर्न फिल्म खेल्ने प्रस्तावलाई स्वीकार्छिन् कि स्वीकार्दिनन् ? चासोको विषय बनेको छ ।